Cabdi Qaybdiid oo ka Hadly Duqeytii Duleedka Gaalgacyo (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Cabdi Qaybdiid oo ka Hadly Duqeytii Duleedka Gaalgacyo (Daawo Sawirada)
General Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid), Madaxweynihii hore ee Maamulka Galmudug, ayaa Jimcihii dib ugu laabtay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Madaxweynihii hore Galmudug, ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarka dhinaca cirka ee Mareykanku uu ku dilay saddex iyo toban ka mid ah Ciidamada Galmudug, iyadoo tiro kalana uu ku dhaawacay.
Cabdi Xasan Cawaale oo boqolaal ruux kula hadlaayay Magaalada Gaalkacyo, ayaa Dowladda Somaliya iyo shacabka reer Galmudugba kaga tacsiyadeeyay duqaynta lagu laayay askarta.
Waxaa uu dhibaato kale uu ku tilmaamay, haddii dhibaato soo gaartay dadka reer Galmudug loo baahnaa in caqligu shaqeeyo, isla-markaana looga garaabo dhibaatadaasi.
Maamulka Puntland, ayuu ku eedeeyay in saddexdii maalmood ay shacabka reer Galmudug bannaanbaxyada ka wadeen Gaalkacyo, in dhinacooda ay uga dabaaldeggayen duqayntaasi, oo ay ku andacoonayan in lagu fashiliyay weerar kaga soo wajahnaa Ururka Al Shabaab.
Dhinacyada ay khuseyso duqayntan, ayuu ugu baaqayo inay guddi xaqiiqo raadin ah u soo diraan goobtii ay duqayntu ka dhacday, si ay meesha kaga saaraan wararka xaqiiqda ka baxsan, raaligelin iyo magdhow-na looga siiyo Galmudug.
Isagoo farriin u diraayay Puntland, ayuu yiri “Waxaan leenahay walaalayaal waxa la dilay waa walaalihiin, waxa la dilay waa wiilashiinii, waxa la dilay kuwii berri ku kaalmeen lahaa, Qarankan iyo Somaliyana wax u tari lahaa. Marka waxaan leeyahay way khaldameen, xisaab bayse galeysaa, xisaabta noogu darra.”
Safiirka Mareykanka ee Somaliya oo ka hadlay Duqeyntii Mareykanka uu kageestay Galmudug
Golaha wasiirrada oo war murtiyeed kasoo saaray duqeyntii ka dhacaday Gaalkacyo (Daawo Sawirro)